Ungadzima Sei Tsvaga yangu iPhone? - Sei
Ungadzima Sei Tsvaga yangu iPhone?
Panogona kuve nechimwe chinhu chinokurumidza kuita kuti iwe udzime chimiro. Zvingave zvekupa foni kure kune mumwe munhu. Pamwe urikuisiya paApple Store yebasa. Neimwe nzira, kana iwe wafunga kufekitori foni yako, zvinoda kuti iwe usamise iyo 'Tsvaga yangu iPhone‘Kuita sarudzo.
Nekudaro, inogona kuve rinotyisa basa kumisa sarudzo. Sei? Nekuti pane nzira nhatu dzinozivikanwa uye ungangodaro usazive kuti ndeipi nzira yakakwana kwauri. Zvinotonyanya kukosha, kana iwe usingazive mashandisiro eichi chinhu kana kuchidzimisa, ichi chinyorwa chinokubatsira iwe kudzidza zvese zvaunoda kuti uzive. Saka pasina kumwe kunonoka, ngatitangei!
Mamwe ma iPhone Guides:
Gadzira iPhone Haikwanise Kubatanidza kune iTunes
Ungaziva Sei Fake iPhone 12?
Maitiro Akanyanya Kudzima Tsvaga Yangu iPhone:
Maitiro # 1: iPhone Zvirongwa
Zvingave zvakanaka kana iwe uine yako Apple ID nePassword kuti uwane iwo marongero ekumisa sevhisi. Pasina izvi zvitupa, haugone kuchinja rairo yeiyi marongero. Zvakaenzana, iwe haugone kuzviitira kune vamwe vanhu mafoni kunze kwekunge iwe uchiziva ID yavo uye password.
Enda kumamiriro eiyo iPhone yako
Iwe uchaona zita rako kumusoro kwezvirongwa. Tinya pairi.
Enda kune iCloud sarudzo, uye ipapo iwe unowana iyo 'Tsvaga Yangu iPhone' sarudzo.
Kana bhatani riri girini, sevhisi iri kushanda. Tinya pairi kuti uikanganise.
Ichakukumbira yako Apple ID nePassword. Ndokumbira upe magwaro ako.
Basa racho rinenge risisaite.
Nekudaro, iyi sarudzo inoshanda chete kana iwe uine chako kifaa. Kana iwe usiri wako mudziyo zvakare kana uchangobva kuchinja foni yako kune nyowani modhi, ungangoda kuidzima iyo yefoni yekare. Zvikasadaro, iwe unogara uchiwana zvigadziriso uye zviziviso zvine chekuita nazvo. Nezve izvo, iwe unofanirwa kuzviita kuburikidza neapp kana webhusaiti.
Maitiro # 2: iCloud Kana Webhusaiti Nzira
Kutanga, iwe unogona kuvhura yako foni yekutsvaga app pane chishandiso chitsva, kana kushanya https://www.icloud.com/find
Dzese sarudzo idzi dzinokuratidza zvishandiso zvakanyoreswa pasi peID yako
Sarudza chishandiso chaunoda kudzima sevhisi yacho.
Iwe ungatofanira kubaya pane chiito chayo.
Wobva wadzvanya pane 'bvisa mudziyo.'
Kuti usimbise, pinda magwaro ako
Kana ikangodzimwa, unogona kubvisa iyo account kuti ubvise kubva kuapp yako zvakakwana
Ko Kana Iwe usina Apple ID?
Apple inozivikanwa neyepasi-kirasi uye yekupedzisira-mushandisi chengetedzo. Naizvozvo, hapana anozivikanwa epamutemo kana epamutemo nzira dzekuwana iyo marongero uye kumisikidza kana kuimisa pasina yepamutemo Apple ID. Iwe unofanirwa kuve nezvako zvitupa, kana munhu wacho kuti agovane yavo ID nephasiwedi kana iwe uchida kuzviitira iwo mudziyo wavo.
Kana iwe wakanganwa ID yako kana password, unogona kuitora kuburikidza neyako kifaa. Muzvirongwa, pane password & chengetedzo kwaunogona kutevedzera nhanho dzekuchinja password.
Nei Uchifanira Kuimisikidza?
Hupenyu hwedu hwakatenderedza mafoni edu. Ivo vanowanzo chengeta ruzivo rwedu rwakakosha kubva kuzvitupa kusvika kumagwaro akakosha. Vanhu vane hanya zvakanyanya nekurasikirwa nemafoni avo kupfuura chikwama. Zvakangwara kuita kuti chimiro chiitwe kuti chiwedzere kuchengetedzwa, kunyanya kana iwe uri panze kana munzvimbo yeruzhinji. Kana iwe uri mumwe munhu ane hushoma hwekutarisisa uye unowanzo kukanganwa kwawakaisa foni yako, chinhu chinoshanda.
Heano Zvimwe Zvimwe Zvikonzero:
Kana iwe warasikirwa nechishandiso chako, unogona kuchiwana pamepu kuburikidza nekufamba kweGPS nekutsvaga yangu sarudza chishandiso. Zvinotonyanya kukosha, iwe unogona kubatanidza akawanda Apple zvishandiso pane imwechete app chikuva chekutarisa zvese izvi Apple zvigadzirwa. Naizvozvo, inzvimbo yako imwechete yekuchengetedza zvishandiso zvako.
Kana iwe usingakwanise kuwana chako kifaa chakatenderedza imba, iwe ungangove wakachiisa kune imwe nzvimbo uye wakanganwa. Iwe unogona nyore kutamba kurira pane yako kifaa kuti uiwane. Kune izvi, iwe unogona kuwana iyo app kuburikidza nemamwe madhizaini kana PC kuburikidza neiyo yepamutemo iCloud webhusaiti.
Kana iwe warasikirwa nechishandiso chako kana kuti chakabiwa, pane sarudzo yekuti iwe uvhare mudziyo. Iyo inodzivirira yega data kubva kuwira mumaoko asiri iwo. Zvinotonyanya kukosha, iwe unogona kupa yekuratidzira meseji ine ruzivo rwekusvika kwauri kana kubata iwe. Chinhu chinoshamisa chinoita kuti zvive nyore kuti vanhu vakuwane uye vakupe foni.
Kana iwe uchida kudzora iyo data uye kuidzima iri kure, zviri nyore kuzviita kuburikidza neapp. Naizvozvo, Tsvaga Yangu iPhone chinhu chinoshamisa icho chaunofanirwa kuramba uchigadzirisa.
Nei Uchiremadza Sarudzo?
Panogona kuve nezvikonzero zvisingaverengeke zvekuremadza chimiro, kunyanya kana zvichikonzera kusagadzikana kune vashandisi. Zvinogona kunzwika sezvisingaiti, asi kune zvikonzero zvakawanda zvekudzima chimiro. Heano mamwe eanowanzozivikanwa iwo:
Apple Service Chitoro inokukumbira kuti ubvise chimiro.
Kana iwe uchipa icho chishandiso kana kuchitengesa kune mumwe munhu, iwe unofanirwa kuregedza chimiro
Vanhu vazhinji vanosimudzira kuenda kumidziyo mitsva uye vangangokanda kure kana kupa michina yekare, izvo zvinoda kuti iwe usamise chimiro
Pamwe une maApple akawandisa uye unoda kugadzira akasiyana maratidziro e'Tsvaga yangu iPhone 'yechinangwa chega chega chekurerutsa tracker
Kubvisa zvimwe zvishandiso kubva pane zvinyorwa
Mumwe munhu vanhu haavimbe neiyo geolocation masevhisi kana kunzwa sekumisa chinhu chinochengetedza bhatiri uye mashandiro
Zvisinei nechikonzero chauinacho, inogara iri sarudzo chaiyo yekudzidza zvese nezve yako iPhone. Dzimwe nguva, ungangoda kubatsira shamwari yako kubuda, uye kana uchiziva kuzviita, unogona kuve munhu anobatsira.
Mufambiro unovhara nzira dzese nhatu dzinozivikanwa dzekudzima Tsvaga yangu iPhone. Kunze kwekunge iwe uine chikonzero chinogombedzera, ndapota rega kutevera kuburikidza nechero yeiyi sarudzo. Chero nzira, tinovimba kuti wakazviwana zviri nyore kushandisa izvi sarudzo. Unogona kutevedzera nhanho idzi kune chero Apple kifaa uye kwete yako iPhone chete. Rangarira, kuchengetedzeka kwakakosha munyika yanhasi yedhijitari, uye Apple iri kuita nepainogona napo kukupa kudzora kwakazara kwechigadzirwa.
Akanakisa Wadhi Yekuchaja Mapedhi (2020)
10 Best iTunes Dzimwe nzira
Netflix Statistics (2020) - Chokwadi, Mashandisiro & Mari Yemubhadharo
sei kudzikunura roblox kodhi
anonzwika emahara emabhuku evadzidzi
tarisa azvino mafirimu emahara online
mawebhusaiti emahara ekuona terevhizheni uye mafirimu
mahara emahara ekuona terevhizheni online
inoita bluestacks inoshanda pa mac